If I’m dead, ?????????? | The World of Pinkgold
BarNyar on February 4, 2008 at 11:57 am said:
ငါ့ဆီတော့ လာနဲ့ ကြောက်တယ်.. =P
ကောင်းကင်ကို on February 4, 2008 at 1:12 pm said:
Happy Ghost လုပ်မယ်ဆိုပဲ။ ကောင်းတယ်။ မြန်မြန်ချ။ 😀
မောင်မျိုး on February 5, 2008 at 3:49 am said:
၀ိုးး…အတွေးကလဲဝင်တတ်ပါပေ့ဗျာ ကြောက်စရာကြီး ဖန်ဆင်နိုင်တဲံ့ သူရဲမလေးဆိုကောင်းမယ်ဗျ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို ကယ်နိုင်တဲ့ သူလေးလေ..
ကျနော်လဲ မသေဆုံးခင်တော့ တစ်ခုခုလေးအကျိုးပြုချင်တယ်…..
Pinkgold on February 5, 2008 at 6:04 am said:
လာမှာ လာမှာ ဘာညာ့ဆီ အရင်လာမယ်
ကိုကောင်းကင်ကိုတို့ မောင်မျိုးတို့လည်း ဘုရားသာ တထား
Ka Daung Nyin Thar on February 5, 2008 at 6:21 am said:
ဟဲ့ ငါ့ဆီကိုလာ သိလား။ ငါက သရဲမွေးမှာ။ ပြီးရင် ငါမကျေနပ်တဲ့သူတွေ မကြိုက်တဲ့သူတွေကို ခြောက်ခိုင်းမှာ။ ဟိ
စိုးထက် - Soe Htet ! on February 5, 2008 at 7:30 am said:
အင်းးး … သူငယ်ချင်းတွေကို တစ်ခုခု အရင် လုပ်ပေး ခဲ့ပါလား မသေခင် 😛 ကျန်တာနောက်မှ 🙂
Synchro 305 ~ on February 5, 2008 at 9:42 am said:
အောင်းမယ်ရေး…. ဖျား..ဖျား… အနော့်ကိုတော့ဘာမှလုပ်နဲ့ နော်.. လုပ်ချင်ရင်လည်းအမြဲ Ban Ban နေတဲ့ Server ကြီးသာဒုတ်နဲ့ ထိုးပြစ်… 😛
Prizewai on February 9, 2008 at 9:34 am said:
အဲဒီလိုမျိုး စဉ်းစားဖူးတယ်။ တူတူသွားမယ်လေ။ အဖော်ရတာပေါ့။ ခေါ်လိုက်နော်။